Ukubaluleka kwelogo kuyilo lwamaphepha ewebhu kunye nemibutho. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubaluleka kwelogo kuyilo lwephepha lewebhu
UJavi solans | | ILogos
El logo Esi siqwenga sichaza uphawu kwaye sinokusetyenziselwa iminyaka, sibonwe lihlabathi liphela. Injalo ngokoqobo ubuso benkampani kwi-intanethi. Kungenxa yoko le nto zonke izinto eziza kwenza ilogo ziya kubaluleka kakhulu.
Kwaye ngokuqinisekileyo ilogo ekugqibeleni yeyona nto inzima ukuba yenziwe ngumyili, ukuba ayingoyena mkhulu. Oku kubandakanya ukwenza umthambo wengqondo nowomzimba ukuze ufumane ukuhlanganiswa kwayo yonke into echaza inkampani, iprofayili okanye uphawu kwaye uyimele ngokuzotywa ngesitampu esincinci.
1 Izithintelo xa usenza ilogo
2 Isitshixo sempumelelo
3 Ukubaluleka kwengxelo
Izithintelo xa usenza ilogo
Ngexesha lokudala i-logo yephepha elithile lewebhu, kuyinyani ukuba zininzi izinto ekufuneka zisisiphumo sokucinga komyili, kodwa zininzi izinto eziyinyani kunye neengqungquthela ekufuneka zizalisekisiwe xa ufuna ukufumana. iziphumo ezilungileyo, umzekelo, ukubekwa kwayo kuyilo loyilo 'lwewebhu' yewebhu. Zingaphi iilogo ozibonileyo ezingafumanekiyo phezulu ngasekhohlo ephepheni? Kwaye kukho umgaqo wokungazibandakanyi ukubeka itywina kuloo ndawo kuba umsebenzisi sele elindele ukuba ibekwe apho kwasekuqaleni.
Kwaye ukuba ulindelo ludlala indima ebaluleke kakhulu ekusebenzeni.
Kuyangqinwa ukuba ukubeka ilogo kwindawo engeyiyo le ichazwe apha ngasentla kuya kulonakalisa iphepha lewebhu kwaye kuya kuba njalo Amaxesha ama-6 ayintsokothile buyela kwiscreen sasekhaya ngumfundi. Kukwakho nokusikelwa umda ukuba luvelise uphawu ngokwalo. Ukulindelwa okutsha kuyavela kwakhona, nokuba kungenxa yegama, imigaqo-siseko okanye umxholo wolu hlobo.
Kulapho umceli mngeni woyilo ulele khona: fumana eyona ndawo inokwenzeka yokudala nangona kukho inani lezithintelo. Kwaye indlela esetyenzisiweyo ukomeleza isazisi kunye nelogo yoluhlobo ekugqibeleni iya kudlala indima ebaluleke kakhulu kwimpumelelo yaloo logo. Kulapho ukubakho kokuzisa ubuchule kunye nokudlala kumbutho kulele ngendlela yokuba ukwazi ukufumana ukujonga kondwendwe.
Esona sisiphumo sokucinga okunzulu kunye nenani elikhulu leemvavanyo zangaphambili kunye neenketho, kwimeko yam, zihlala zithanda ukwenza ukungabaleki iziketshi Ngenxa yokuba yeyona ndlela ikhawulezayo nesebenzayo yokufumana iziphumo ezinqwenelekayo (siza kuthetha ngayo kwithuba elizayo), inokubeka umbutho ngaphezulu kokhuphiswano lwayo kuba ibamba onke amehlo oluntu.
Kwaye kunokwenzeka ukuba, indibaniselwano yolindelo kunye nobuchule bokwenza izinto Inokuba sisitshixo sempumelelo yelogo, nokuba yenzelwe injongo efunekayo, ukufaka isicelo kumbutho, ukubamba okumangazayo kunye nokudlala okukhokelela undwendwe ukuba luhlolisise iikona ngaphandle kokungenelela komyili ngewayengazange atyelelwe . Indalo ekhuthaza uluntu ukuba luthathe amanyathelo okuzenzekelayo ngenxa yomnwe wokurhanela osetyenzisiweyo kuyilo kunye nolungelelwaniso ngokutsha lwamacandelo oyilo lwephepha lewebhu.
Kufuneka ikhunjulwe kwakhona ukuba ingasebenzisi izinto okanye izigqibo ezinokuhlukanisa iqela labasebenzisi, kule meko, kwaye kuthintelwe kunye nokulindelweyo kufuneka kuyekwe ukuze kufikelelwe kwinani elikhulu labakhenkethi ngokusombulula ezo zinto zinokonakalisa okanye zenzakalise umbutho. ngandlela thile.
Nangona kunjalo, ekugqibeleni, ngokuqinisekileyo yonke into ekuxoxwe ngayo ingemva nje kokuba ilogo kunye nezinto ezintsha sele zenziwe. Kungenxa yokuba eyona nto ibaluleke kakhulu kuyo yonke le nkqubo yile ingxelo yenziwe, ngokuqinisekileyo ngokungazi, lulo lonke undwendwe. Kwaye kukuba oku, nokuba banemizobo yemizobo okanye akunjalo, ukudityaniswa kommeli omtsha kunye 'nesitywina' sombutho wonke kuya kuba nefuthe kubo. Yiyo loo nto ezi zigxeko zimele ukumanyelwa, ziqaphele ezo ndwendwe zichaphazeleke kakubi lutshintsho kwaye zibonelele ngomfanekiso omtsha ophucukileyo wento abayiqondayo ukuza kuthi ga ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » ILogos » Ukubaluleka kwelogo kuyilo lwephepha lewebhu